Dagaallo 50 Qof Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Caasimadda Wadanka Liibiya.
Tuesday September 04, 2018 - 11:37:32 in Wararka by Super Admin
Dagaallo lagu hoobtay ayaa wali kasii socda wadanka Liibiya ee dhaca Manidqadda Maqribul islaami ee waqooyiga qaaradda afrika.
Wararka ka imaanaya Liibiya ayaa sheegaya in dagaalka waddooyinka oo maalmo qaatay uu maleeshiyaad hubeysan ku dhaxmarayo bartamaha iyo Koonfurta magaalada caasimadda ah ee Daraabulis.
Goob joogayaal ayaa sheegay in gaadiid Tiknikada ay ka qeyb qaadanayaan dagaalladan, in kabadan 400 maxaabiis ah oo katirsanaa nidaamkii Mucamar Alqadaafi ayaa ka baxsaday mid kamida xabsiyada magaalada caasimadda ah.
Ciidamadii ilaalinayay xabsiyada maxaabiistu ka baxsatay ayaa la sheegay in ay sugi kari waayeen ammaanka kadibna ay maxaabiistu cagaha waxka dayeen, cisbitaallada magaalada daraabulis ayaa laciir ciiraya dhaawacyada boqolaal qof sida ay sheegeen dhaqaatiirka caafimaadka.
Laba maalmod gudahood ayay dhimashadu gaartay 50 ruux oo isugu jira dhinacyada dagaallamaya iyo dad shacab ah oo rasaastu guryahooda ugu gashay, jabaqda rasaasta iyo madaafiic lays weydaarsanayo ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada iyo hareeraheeda.
Garoonka diyaaradaha caalamiga Daraabulis ayaa xiran muddo sedax maalmood ah majirto cid soo geli karta iyo cid ka bixi karta magaalada.
Dhinacyada loollamaya dhammaantood waa dagaal oogayaal ucaysan waxa loogu yeero Beesha caalamka waxa ay isku dilayaan ayaa ah sidii ay xukunka uqabsan lahaayeen.